RASMI: Fulham oo ka laabatay horyaalka Premier League… (Waxa ay ku biirtay labadii kooxood ee hore u xaqiijiyey) – Gool FM
(London) 11 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Fulham ayaa ka laabtay horyaalka Premier League kaddib markii ay guuldarro 2-0 kala kulmeen xalay naadiga Burnley.
Kooxda kaalinta 18-aad ku jirtay ee Cottagers ayaa kulankan wajahday Naadiga Burnley oo fadhisay kaalinta 17-aad, waxaana ay maanka ku haysatay in guuldarro soo gaarta ay isaga dhici doonaa horyaalka Premier League, isla markaana ay xilli ciyaareedka soo socda ka ciyaari doonaan Championship-ka.
Si kastaba ha noqotee, goolal qeybtii hore ay u kala dhaliyeen Burnley, Ashley Westwood iyo Chris Wood ayaa looga adkaaday Fulham 2-0 kulankii ka dhacay garoonka Craven Cottage, iyadoo sidaas ku xaqiijisay Fulham inay u laabatay heerka labaad ee Ingiriiska.
Natiijadaas ayaa ka dhigtay in kooxda Tababare Scott Parker ay ku jirto kaalinta 18-aad, iyadoo leh 27 dhibcood, isla markaana 10 dhibcood u jira badbaadada, inkastoo kaliya ay saddex kulan u harsan yihiin.
Fulham ayaa heerka labaad u laabtay kaliya hal maalin kaddib markii West Bromwich Albion ay xaqiijisay inay u dhacday heerka labaad markii ay Axaddii guuldarro kala kulmeen Kooxda Arsenal.
Sheffield United ayaa sidoo kale ka ciyaari doona horyaalka Championship-ka xilli ciyaareedka soo socda, taasoo la micno ah in saddexdii kooxood ee ka laaban lahaa horyaalka Premier League ay sii xaqiijiyeen iyadoo ay min saddex kulan u harsan tahay, waana markii ugu horreysay taariikhda ay saddex kooxood xaqiijiyeen inay la laabteen horyaalka iyadoo min saddex kulan u harsan tahay.
Fulham oo haatan ka dhacday horyaalka Premier League ayaa dhammeysan doonta joogitaankeeda horyaalka Premier League kal ciyaareedkan, isla markaana ciyaari doonta kulamada ay la leeyihiin Kooxaha Southampton, Manchester United iyo Newcastle United.